Xildhibaanno ku baaqay in la aqbalo dib u dhigista Doorashada KGS – Kalfadhi
Xildhibaanno ay deegaan-doorashadoodu tahay Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ayaa maanta dalbaday in la fuliyo baaqii Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee ahaa in dib loo dhigo Doorashada Madaxweynaha KGS. Kulan ay ku yeesheen Muqdisho kadib ayey soo saareen War-saxaafadeed ay ku qoran tahay 6 qodob, ooku wajahan doorashadaas.
Dalabka dib u dhigista Doorashada KGS ee Guddoomiye Mursal, oo ay horay u qabeen Mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayey sheegeen in ay keeni karto in marka hore laga shaqeeyo dib u wanaajinta xiriirka Reer KGS, “si loo helo” bey yiraahdeen “doorasho xor ah, oo xalaal ah, oo jawi degan ku dhacda”.
Waxay ku baaqeen in la soo daayo dad ay tilmaameen iney u xiran yihiin si aan sharci ahayn. Dadkaas waxaa qeyb ka ah Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo, isagoo musharrax madaxweyne u ah Doorashada KGS, ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) xirtay, kaas oo ay markale ku celiyeen ineyxariggiisa cambaareynayaan.
Waxay War-saxaafadeedkooda ku dhex yiraahdeen “Libaax Nin Ganay iyo Nin Galadayba Kala Og”. Iyaga oo muujinaya sida qotada dheer ee ay u gaxun yihiin xarigga Roobow ayey yiraahdeen “maalin baa soo socota aad qalankiinaku codeyn doontaan, oo aad si cad ugu garab istaagtaan ciddii idinka muteysata”.
DFS ayey ugu baaqeen in ay joojiso waxay ugu yeereen cabsi-galintaay ku hayso Dowlad Goboleedka KGS. “Waxaan Madaxda Dowladda Federaalka ugubaaqeynaa in ay joojiso cadaadiska iyo caga-jugleynta ay ku hayso Guddiga Doorashada, Madaxda Ku-meel-gaarka ah ee maamulka iyo Xildhibaannada Baarlamaanka Koofur Galbeed, taas oo xadgudub ku ah xurriyadda dastuuriga ah” ayey War-saxaafadeedkooda ku yiraaahdeen.